Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga formatted Card
Waxaan ka My formatted Card soo kaban karto, Lost Files?
Qabtaan formatted Card Recovery in 3 Talaabooyinka
1 Waxaan soo kaban karto, Lost Faylal ay ka My formatted Card?
Waxaan haystaa kaarka in uu yahay mid fiican, kaliya si qalad ah formatted. Waxaan isku dayay oo dhan caadiga ah talooyin soo kabashada xogta. Dhammaan wuxuu u soo baxay natiijo lahayn. Ma jiraa barnaamij kasta oo ka dhigaya suurto gal ah in dib u soo ceshano xogta ka card formatted? Thanks.
Tan iyo adiga oo aan gelin wax xog cusub rogtid oo aad kaarka formatted, waxaa jira fursad aad u weyn in aad dib u heli kartaa xog ka kaarka formatted.
Kabashada card formatted waa sida soo kabashada file tirtiray: Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay helaan software kabashada xogta iyo isticmaali software si ay baarista card formatted. Halkan waxaan aad ugu boorinayna Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac aad u. Waa mid ka mid ah barnaamijyada soo kabashada xogta ugu wanaagsan oo awood aad ka bogsato xogta sida sawiro, videos, audio, document files, iwm ka card formatted. No nooca kaadhka xusuusta aad isticmaalayso arrinta, Wondershare Data Recovery waa inay ku caawiyaan.
2 Qabtaan formatted Card Recovery in 3 Talaabooyinka
Haddaba isku dayno la Wondershare Data Recovery dadka isticmaala Windows. Haddii aad tahay user Mac ah, fadlan kala soo bixi version Mac ah.
Tallaabada 1 Select Recovery Mode inay Qabtaan formatted Card Recovery
Ku rakib Wondershare Data Recovery on your computer. Waxaad arki doontaa wax interface ah sida hoos ku muujinaya. Halkan barnaamijka ku taxan 3 hababka soo kabashada si aad u doorato. Si aad u soo kabsado xogta ka card formatted, aynu dooro "lumay Recovery File".
Fiiro gaar ah: Fadlan hubi in kaarka formatted weli waxaa laga garan karaa your computer.
Tallaabada 2 Dooro Card Your formatted leeg u Khasaaray Files
In tallaabadaas, barnaamijka wuxuu muujin doonaa oo dhan drives adag maxalliga ah iyo xirmaan storage devices in your computer. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan mid ka mid ah kaarka formatted oo guji "bilow" in iskaan for files lumay.
Tallaabada 3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh helay faylasha iyo Xulo Ladnaansho
Scan ka dib, dhammaan faylasha helay kaarka formatted lagu soo bandhigi doonaa qaybaha ama waddooyinkiisa. Waxaad mid ka mid ah ku eegaan kartaa sawiro iyo ku eegaan magaca files kale si ay u hubiso in ay yihiin waxa aad doonaysid in aad ka soo kabsado ama aan. Waxa kale oo aad ka raadin kartaa waxaad doonayay files ay la tilmaamayo magaca file in bar baadhi ah.
Ugu danbeyn, files xulo aad rabto in aad soo kabsadaan oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya, si aad u computer. Fiiro gaar ah: Fadlan ha badbaadiyo files soo kabsaday dib ugu kaarka formatted ka dib markii dib u soo kabashada.
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga formatted Cards